Vaovao momba ny iPhone | IPhone News (Pejy 25)
Izay rehetra heverinay fa fantatray momba ny iOS 8
Miatrika ny fahatongavan'ny iOS 8 tsy ho ela eo amin'ny efijery izahay ary efa misy ny fiheverana momba izay rehetra mety hoentin'ny rafitra fiasan-damba finday vaovao an'ny Apple
Ny marika "Apple" dia mandrakotra (izao) famantaranandro sy firavaka
Ireo avy amin'ny Cupertino dia nanavao ny marika "Apple" ho an'ny faritra vaovao: 14; izay misy metaly, firavaka ary famantaranandro sarobidy amin'ireo faritra misy azy ankehitriny.
Fantsona vaovao roa ho an'ny Apple TV: Channel Channel sy androm-piainany
Apple TV dia efa manana fantsona vaovao roa: History Channel sy androm-piainany
Apple dia namoaka ny iOS 7.1.1. Misintona rohy ho an'ny iPhone, iPad ary iPod Touch
Vao namoaka ny iOS 7.1.1 i Apple. miaraka amin'ny fanatsarana ny fahombiazana sy ny fanamboarana bibikely amin'ny Touch ID, Bluetooth, ary ny fikirakirana tambajotra.
Tsara kokoa: fampielezan-kevitra amin'ny andraikitra amin'ny tontolo iainana Apple
Apple dia namoaka horonantsary iray momba ny andraikitra ara-tontolo iainan'ilay orinasa amin'ny fetin'ny Tany.
Nike mandao ny FuelBand sy ny vokatra marani-tsaina
Noroahin'i Nike tamin'ny fomba mahomby ireo mpiasa 55 tompon'andraikitra amin'ny fampandrosoana ny fehin-tànana manisa ny orinasa, ny Nike FuelBand, nahomby tokoa.
Misy viriosy miantraika amin'ny fitaovana jailbroken amin'ny fangalarana ny Apple ID anao
Virosy iray mandrahona ny hangalatra ny Apple ID anao raha toa ka voafonja ny fitaovanao.
Ny iPhone 6 dia afaka nampiakatra ny vidiny 100 dolara
Ny iPhone 6 dia azo atomboka amin'ny vidiny $ 100 avo kokoa mifandraika amin'ny fifanarahana amin'ireo mpandraharaha
NDS4iOS, lalao Nintendo DS tsy misy jailbreak
Tonga i NDS4iOS, ilay emulator lalao Nintendo DS vaovao ho an'ny iDevices tsy misy jailbreak
Noteren'ny Facebook hampiasa Facebook Messenger izahay: teboka ratsy telo ary hevitra telo tsara
Teboka tsara sy ratsy amin'ny fananganana tsy maintsy atao amin'ny Facebook Messenger
Azo atao ny mameno ny batterin'ny smartphone amin'ny 30 segondra miaraka amin'ny semiconductors biolojika
StoreDot dia namorona charger izay mamela ny famahana bateria finday avo lenta ao anatin'ny 30 segondra fotsiny.
Ny fampiasana lehibe ny fitaovana finday dia ho an'ny rindranasa
86% amin'ny fotoana lanin'ny Amerikanina amin'ny fampiasana finday no anaovany fampiharana. Ny andro sisa ampiasain'izy ireo hivezivezena amin'ny Safari
Raha manana Pebble ianao dia aza sintonina ny kinova farany an'ny app
Ny fanavaozana farany Pebble dia miteraka olana eo amin'ireo mpampiasa
Nangataka ireo mpampiasa azy ny Square mba hanatsara ny mpamaky karatra vaovao maimaimpoana
Mamporisika ny mpampiasa azy ny Square mba hanatsara ny mpamaky karatra vaovao
Ny tombony Foxconn sy Pegatron dia mitombo noho ny varotra tsara avy amin'ny Apple
Ny vola miditra ho an'ny mpanamboatra Foxconn sy Pegatron dia nitombo tamin'ny taon-dasa noho ny varotra tsara avy amin'ny Apple
Inona ny atao hoe Oculus VR? Ilay orinasa vaovao novidin'ny Facebook
Ny fahazoana Facebook farany dia ny orinasa Oculus VR mitentina 2000 miliara dolara, manodidina ny 1450 miliara euro amin'ny fifanakalozana.
Ilay sarimihetsika 'Jobs', azo alaina amin'ny streaming amin'ny Netflix ankehitriny
Netflix dia manome amin'ny alàlan'ny fandefasana ilay sarimihetsika mahaleo tena "Jobs"
Ny bitsika iOS 7.1 dia mahatonga ny fampiharana tsy hanjavona amin'ny efijery
Ny lesoka koa dia mety hahatonga ny apps tsy ho hita eo amin'ny efijery an-trano tanteraka.
iOS 7.1 dia manome olana ho an'ny mpampiasa amin'ny fizarana Internet
Toa iOs 7.1 dia mamorona fifandonana fikirakirana amin'ny safidin'ny fizarana Internet an'ny iPhone, mpampiasa maro no nitatitra an'ity olana ity tamin'ny forum.
Ny charger universal dia tsy ny tselatra, fa tsy ny microUSB
Ny fenitra Eoropeana vaovao dia hanery ireo mpanamboatra hampiasa ilay mpampitohy mitovy amin'ny mpanohana azy. Inona no hitranga amin'ny Apple's Lightning na ny microUSB ankehitriny?
Ny Vondrona Eropeana dia manizingizina amin'ny micro USB ho toy ny charger Inona no hataon'i Apple?
Inona no tanjona tamin'ny 2011, dia iray amin'ireo adihevitr'ireo firenena mpikambana. Ny EU dia manizingizina amin'ny micro USB ho charger Inona no hataon'i Apple?
FaceTime Plus: ny Chatroulette ho an'ny mpampiasa iPhone
FaceTime Plus dia rindrambaiko iray mamela antsika hifandray amin'ny olona samihafa eran'izao tontolo izao
Sary voalohany amin'ny serivisy antso WhatsApp
Miseho ireo sary voalohany amin'ny serivisy antso WhatsApp VoIP
Ny fampiharana Starbucks dia hamela anao hanafatra ny kafe dieny mialoha
Ny fampiharana Starbucks ofisialy dia havaozina amin'ny faran'ny taona mamela ny famandrihana kafe
Apple mandefa ny iOS 7.1 miaraka amin'ny fanatsarana ny hatsarana sy ny vaovao hafa
Ny iOS 7.1 dia azo alaina ho an'ny mpampiasa iPhone, iPad ary iPod Touch ankehitriny
ReSound LiNX, fitaovana fanampiana voalohany heno ho an'ny iPhone
Ny GN ReSound dia niara-niasa tamin'i Apple mba hampahafantatra ny ReSound Linx, ny rafi-pampandrenesana voalohany natao ho an'ny iPhone.
Vine dia hanala horonan-tsary mamoa fady
Tamin'ny lahatsoratra bilaogy Vine vaovao, nilaza ity orinasa ity fa tsy manana olana amin'ny atiny mamoa fady amin'ny Internet, aleon'izy ireo tsy izy no loharano niavian'izany.
Ny traikefako niaraka tamin'ny fanohanana ara-teknolojia nandoa an'i Apple
Izany no fomba fiasan'ny fanohanana ara-teknika omen'ny Apple amin'ny alàlan'ny tranokalany
Misy iPhone 5s manoratra ny toerana misy ny finday mandritra ny 4 andro
Ny vaovao dia nateraka hevitra iray tao amin'ny Reddit nataon'ny mpampiasa iray nitantara ny zavatra niainany; ny iPhone 5s anao dia nandrakitra ilay toerana tamin'ny finday 4 andro
Mercedes-Benz sy Ferrari dia mampiseho antsika amin'ny horonantsary ihany koa ny fomba fiasan'ny CarPlay
Fampisehoana an-tsary ny fomba fiasan'ny Apple CarPlay amin'ny Mercedes-Benz C-Class vaovao sy Ferrari FF
CarPlay dia ho endri-javatra iOS
Nanamafy i Apple fa haseho amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny Geneva International Motor Show i CarPlay.
Apple dia handoa vola amin'ny fanampiana ara-teknika an-tarobia raha toa ka tsy manana antoka ianao
Apple dia namolavola rafitra fandoavam-bola vaovao hampiasaina hampiampangana ireo mpampiasa izay, rehefa tsy misy antoka, mangataka fanampiana ara-teknika an-tserasera
Moov, mpanazatra manokana manokana
Moov dia azo itondra izay mamela anao hanana mpampiofana matihanina mandritra ny fanatanjahan-tena, manatsara ny fahombiazanao ary misoroka ratra.
Global Mobile Awards; Sokajy 1, ny loka mifandraika amin'ny fiainana
Global Mobile Awards, Nomena ny sokajy "Connected Life Awards"
Miaro i Magisto fa ratsy ny horonantsary an-tserasera satria tsy manitsy ny atiny izahay
Oren Boiman, mpiara-manorina sy tale jeneralin'ny Magisto dia manome antsika ny fahitany ny ho avin'ny horonan-tsary amateur, izay mandalo filàna fanitsiana mba tsy ho jerena.
Miasa mitovy amin'ny Touch ID ve ny sensor amin'ny dian-tànana amin'ny Galaxy S5?
Fampitahana ny sensor an'ny dian-tànan'ny Galaxy S5 vs Touch ID an'ny iPhone 5s
Fampitahana: Samsung Galaxy S5 vs. IPhone 5s
Mampitahainay ny masontsivana ara-teknikan'ny iPhone 5s amin'ireo an'ny Galaxy S5
Ny iPhone 5s iray izay mirehitra ary nipoaka dia toa izao
Androany dia hitantsika fa nisy mpamaky iray nandefa tamin'ny Internet sary vitsivitsy an'ny iPhone 5-ny azy taorian'ny nipoahany sy nanomboka may. Hamarino tsara fa tsy hampiasa tariby fahatelo.
Nesorin'i Fitbit ny varotra Force tamin'ny fivarotana noho ny fahasosoran'ny mpampiasa
Noterena ny orinasa Fitbit hanafoana ny varotra ny fehin-tànany Force noho ny olana mifandraika amin'ny allergy amin'ny hoditry ny mpampiasa.
Izay rehetra tianao ho fantatra momba ny kristaly safira, saingy tapaka nanontany. Ity dia famintinana ireo fiasa izay mahatonga azy manokana ho an'i Apple.
iBand: Hevitra vaovao momba ny fiambenana "Fitness" an'ny Apple
Gadget Review T3 dia namorona hevitra momba ny mety ho fitaovana manaraka an'i Apple: ny iBand.
Apple nanamboatra endrika ny iTunes Connect
New Version of iTunes Connect, ny sehatra ho an'ny developer
Ahoana ny fomba filalaovana ny anaram-boninahitra Nintendo amin'ny iPhone Safari nefa tsy misy ny Jailbreak
Avy amin'ny vavahady webNES dia azonao atao ny milalao anaram-boninahitra Nintendo, satria izy io dia miasa tahaka ny emulator ROM izay notehirizinay tao amin'ny kaonty Dropbox anay.
Izany no mitranga raha ampahafantarina ampahibemaso ny nomeraon-telefaoninao amin'ny fampisehoana vokatra misy fiatraikany lehibe, toy ny iPhone.
Ny iWatch dia afaka mampiasa sensor optika handrefesana ny haavon'ny oxygen sy ny tahan'ny fo
Nanampy andiana tsaho vaovao momba ny iWatch, izay mety ahitana sensor ho an'ny fandrefesana ny oksi oksiôna sy ny tahan'ny fo.
Ny famokarana ao amin'ny orinasa Arizona dia antenaina hifantoka amin'ny famokarana fampisehoana. Etsy ankilany, ny fampidirana ireo fitaovana dia manolotra fanombohana aloha.
Ny fananana ny safidy "Find my iPhone" dia ampandehanana ao amin'ny iCloud dia iray amin'ireo fitaovana lehibe indrindra hiarovana ...
Samsung dia mangataka ny hanafenana ireo logo iPhone mandritra ny lanonana fanokafana
Samsung dia hanome Galaxy Note 3 ho an'ny atleta ho takalon'ny fanafenana ny sary famantarana iPhone mandritra ny lanonana fanokafana
Ohatrinona ny vidin'ny iWatch an'i Apple rehefa manomboka izy?
Ny fanontaniana an-tapitrisany dolara: Ohatrinona ny vidin'ny iWatch an'i Apple eny an-tsena? Manana ny heviny ny mpandinika ary mifanaraka daholo fa ny vidiny dia latsaky ny 300 $.
Apple dia mikatona amin'ny fampiharana tsy mampiseho doka
Apple dia manomboka mangeja ireo fampiharana izay mangataka ny fampahafantarana manokana ny dokam-barotra ho an'ny mpampiasa, saingy tsy mampiseho doka akory ao anatin'ny fampiharana, na dia manara-maso ny mpampiasa aza izy ireo.
Paper, ilay fampiharana Facebook vaovao, azo alaina ao amin'ny App Store ankehitriny
Ny fampiharana Facebook vaovao, Paper, dia azo alaina ao amin'ny App Store ankehitriny, miaraka amina fampisehoana hafa tanteraka
Apple manadihady tranga bateria iPhone 3GS izay mitobaka nefa tsy mipoaka
Tsy vao sambany isika miresaka momba ny fipoahana iPhone, amin'ity tranga ity dia manadihady ny tranga misy ny baterian'ny 3GS iPhone i Apple fa tsy mipoaka.
Apple dia mitombo miadana kokoa noho ireo mpifaninana aminy raha manamafy ny toerany kosa i Samsung
Apple dia mitombo kely eo amin'ny tsenan'ny smartphone iraisam-pirenena noho ny mpifaninana aminy
Ny fantsona 'Red Bull TV' dia azo alaina ao amin'ny Apple TV
Apple manampy fantsom-pahitalavitra Redbull amin'ny Apple TV
Carrefour mobile koa dia manolotra iPhone 5s
Carrefour Mobile dia manomboka ny fizarana ny iPhone 5s. Zahao ireo fiasa ao amin'ity lahatsoratra ity.
Snapchat Beta ho an'ny Mac Azo alaina
Manangana programa Snapchat ho an'ny Desktop izy ireo
Beats mandefa serivisy famandrihana mozika 'Beats Music' ho an'ny iPhone
Ny serivisy mozika Beats Music streaming vaovao dia efa misy any Etazonia izao, miaraka amin'ny vidin'ny famandrihana $ 9,99 sy ny mety hilalao mozika ivelan'ny Internet
Ny fanadihadiana iray dia mampiseho ny lazan'ny iPhone 5s kokoa noho ny iPhone 5c
Apple patanty FaceTime teknolojia hampihenana ny fandaniana data
Raha misy ny safidin'ny antso Facetime ao amin'ny 3G an'ny iOS 7 dia mieritreritra ianao fa manakana ny fifandraisana ny fandrakofana anao, ho tianao ny patanty Apple izay mandany angona firy.
Ny Apple Store dia hisolo ny efijery amin'ny iPhone 5C amin'ny lesoka sasany amin'ny alatsinainy ho avy izao, ary hamela ny fiovan'ny terminal toy ny teo aloha.
BOX dia nanavao ny fampiharana azy ho an'ny iOS ary hankalazana izany dia manolotra tahiry 50 GB maimaimpoana ho an'ireo mpampiasa miditra eo anelanelan'ny 15 Janoary sy 15 Febroary
Manaiky ny FTC i Apple fa hamerina 32 tapitrisa dolara amin'ireo mpanjifa izay voaloa noho ny fividianana tao anatin'ny fangatahana izay nataon'ireo zaza tsy ampy taona.
Mangalatra vokatra Apple an-jatony amin'ny kamio mihetsika izy ireo
Mangalatra vola mitentina 70.000 XNUMX euro amin'ny vokatra Apple amin'ny kamio mihetsika izy ireo
Apple dia mikasa ny hamoaka indray ny 4Gb iPhone 8 any India
Vonona ny hamerina hamidy ny iPhone 4GB iPhone 8 any Apple i Apple noho ny fahakelezan'ny fivarotana ireo terminal vaovao any.
Apple dia namoaka doka iPad vaovao: Inona ny andininyo?
Apple dia namoaka dokam-barotra amin'ny fahitalavitra mba hampisehoana amintsika ny iPad Air sy izay rehetra azo atao miaraka aminy, amin'ny lafiny injeniera, fanatanjahan-tena na fanabeazana.
Azo atao izao ny mampiasa ny iPad mandritra ny diantsika fiaramanidina
Ny State Aviation Security Agency dia mamela ny fampiasana fitaovana elektronika mandritra ny dingana rehetra amin'ny sidina fiaramanidina.
LaCie Fuel, kapila mafy tsy misy tariby ho an'ny iOS sy Mac
LaCie Fuel dia kapila matevina tsy misy tariby 1TB ho an'ny fitaovana iOS sy OS X
Seas0nPass mamela anao jailbreak Apple TV 5.3
Seas0nPass dia fitaovana iray miaraka amin'ny fanavaozana vaovao, mamela anao jailbreak Apple TV 5.3, afa-tsy ny taranaka fahatelo.
Best Buy androany dia manolotra ny iPhone 5 ho an'ny $ 125
Ny fivarotana Best Buy chain any Etazonia dia manome ny iPhone 5 ho an'ny $ 125 fotsiny
GymPact, ilay fampiharana manome valisoa anao amin'ny fandehanana any amin'ny gym, dia izao 'Pact'
GymPact dia novaina manolotra pact vaovao ho an'ireo mpampiasa azy
Snapchat no voajirika: tafaporitsaka ny mombamomba ireo mpampiasa mihoatra ny efatra tapitrisa
Snapchat dia iharan'ny fanafihan'ny mpijirika ary mivoaka ny fampahalalana mpampiasa mihoatra ny efatra tapitrisa
Hevitra Apple TV mahaliana miaraka amin'ny efijery 47-inch miolaka
Hevitra vaovao an'ny Apple TV miaraka amin'ny efijery miolaka 47
Niarahaba ireo mpiasany tamin'ny Krismasy i Tim Cook
Tim Cook dia niarahaba ireo mpiasany tamin'ny Krismasy tamin'ny alàlan'ny mailaka iray nandraisany ny taona ary nampanantena fitaovana vaovao amin'ny 2014.
Ny evaders dia namoaka taratasy hanazavana ny tsaho momba ny jailbreak vaovao
Ny vondron'ireo mpijirika evad3rs dia namoaka endrika iray izay nanazavan'izy ireo ny toerana misy azy ireo momba ny adihevitra momba ny piraty miaraka amin'ny jailbreak vaovao, sy ny famatsiam-bolany.
Ny boky mifandray amin'ny andiany 'Isabel' dia azo jerena ao amin'ny iTunes izao
Ny filmbook voalohany natokana ho an'ny andiany "Isabel" dia amidy ao amin'ny iTunes Store
Ny varotra ambany ny iPhone 5c any Shina dia mandratra an'i Apple
Mety ho very fifanarahana tamin'i China Mobile i Apple tamin'ny fivarotana singa vitsivitsy amin'ny iPhone 5c any Sina
Seho vaovao efatra izay ho hitantsika ao amin'ny iOS 7.1
Apple dia namoaka beta 2 an'ny iOS 7.1 teo amin'ireo mpamorona. Lazainay aminao ny vaovao hitanay
Touch ID dia mety hijanona tsy hiasa tsara intsony rehefa mandeha ny fotoana
Ireo mpampiasa IPhone 5s dia mitaraina amin'ny olan'ny Touch ID rehefa mandeha ny fotoana
Uber dia mitondra ny hazo krismasy mody
Uber dia manambara ny fizarana hazo krismasy amin'ireo mpampiasa azy
Lifeproof mandefa ny fonony tsy tantera-drano voalohany mifanaraka amin'ny Touch ID
Ny tranga LifeProof sy LifeProof avy amin'ny Lifeproof dia manohana Touch ID amin'ny iPhone 5s
Mangalatra ny iPhone-ny izy fa manana 'fahamendrehana' handefasana aminy ny fifandraisana rehetra
Mangalatra ny iPhone izy ary mandefa antontan-taratasy iray pejy iraika ambin'ny folo miaraka amin'ny mombamomba ny olona mifandray aminy rehetra
Ny votoatin'ny iO dia afaka nalefa tamina fitaovana tsy an'ny Apple, Nokia N900, mbola tsy misy sary fa ity dia vao manomboka.
Tim Cook dia miresaka momba ny fitsipi-pitondrantenan'i Apple ankehitriny
Ny mpiasan'ny Apple dia nahazo kopia nomerika an'ny fitsipi-pitondrantena Apple izay nalefan'i Tim Cook tamin'ny alàlan'ny mailaka.
Mitady serivisy fandefasana mozika tsara indrindra ho an'ny iOS
Manadihady serivisy efatra mifandraika indrindra amin'ny streaming mozika izahay, amin'ny fandinihana ny fetrany sy ny vidiny.
Ny iPhone dia miteraka tsy fivadihana
Ny fampiasana ny iPhone dia mety hahatonga ny sakaizanao hahatsapa ho nilaozana ary noho izany, mora voadika amin'ny tsy fivadihana.
Apple dia liana tamin'ny fividianana ampahany amin'ny BlackBerry, saingy nolavin'ny Kanadiana ilay tolotra
Ny loharanom-baovao akaiky an'i BlackBerry dia nilaza fa liana tamin'ny fividianana ny orinasa kanadianina i Apple
Olana amin'ny fanavaozana Facebook vaovao ho an'ny iOS (raikitra)
Ny fanavaozana Facebook vaovao dia manana ny bibikely hikatona rehefa manatanteraka azy, ka raha tonga ara-potoana ianao dia aza apetraka amin'ny fitaovanao.
Ity no tany hanorenan'ny Apple ny orinasa vaovao ao amin'ny fanjakan'i Arizona
Nisy fihetsiketsehana iPad Air nirehitra tao amin'ny magazay Vodafone any Canberra, Aostralia, tsy nisy naratra ary mpiasa Apple tonga naka azy io.
Ny mpampiasa sasany dia manana olana amin'ny Touch ID amin'ny iPhone 5s
Ny mpampiasa iPhone 5s sasany dia mitatitra ny olana amin'ny mpamaky ny rantsan-tànana amin'ny iPhone 5s
Apple manavao ny iTunes ary manomana fanatsarana ho an'i Mavericks
Ny teti-bidin'ny doka Apple dia kely raha oharina amin'ny Microsoft na Samsung
Aseho ny sary iray izay mampitaha ny teti-bola amin'ny dokam-barotra amin'ny orinasa toa an'i Microsoft, Samsung ary ny farafahakeliny izay an'ny Apple.
Mihomehy ny 'The Simpsons' noho ny tsy fetezan'i Siri
Ny tontolon'i Apple dia hita taratra indray amin'ny andiany The Simpsons, hanesoana an'i Siri
Araka ny vinavinany, Apple dia nanokatra ny Online Store any Torkia raha miresaka momba ny fivarotana ara-batana vaovao ao amin'ny firenena ny Wall Street Journal.
Averina indray, iFixit dia mampiseho amintsika ny fomba fanangonana ny fitaovana vaovaon'i Apple, ny iPad Air. Ny iPad Air dia nahazo naoty mitovy amin'ny iPad Mini.
Apple dia mahatsikaritra ny tsy fahombiazan'ny bateria amin'ny iPhone 5 sasany
Nanaiky i Apple fa misy ny olana amin'ny batterie an'ny sasany amin'ireo iPhones 5s
Ny tranon'i Steve Jobs dia efa lova ara-tantara
Ny trano nandanian'i Steve Jobs ny taona voalohany niainany, izay hita any Los Altos, dia nambara ho loharanon-tantara manan-tantara amin'ny mponina.
"Ny iPhone 5c dia tsy iPhone ho an'ny mahantra" hoy i Tim Cook
Niaro i Tim Cook fa ny fizarazaran-tsena sy ny fiezahana hisambotra tsena an-dàlam-pandrosoana dia tsy natao hatao amin'ny iPhone 5c, fa terminal eo anelanelan'ny fidirana amin'ny 4S sy ny avo lenta izay eritreretin'ireo 5s.
Apple dia nanambara ny angon-drakitra ara-bola amin'ny telovolana farany an'ny Big Apple, Q4
Fahadisoana indray amin'ny iOS noho ny fiovan'ny fotoana
Misy bibikely vaovao miseho ao amin'ny iOS noho ny fiovan'ny fotoana amin'ity faran'ny herinandro ity, ny fampiharana Kalandrie dia tsy mampiseho tsara ny elanelam-potoana.
Molto, mpanjifa mailaka vaovao ho an'ny iPhone
Molto dia rindrambaiko mailaka iPhone vaovao misy famolavolana sy fanohanana kaonty marobe.
Apple manamboatra ny iPhone 5s accelerometer olana amin'ny iOS 7.0.3
Apple dia nanolotra fanavaozana lalina ireo efitrano fiasan'ny birao: iWork sy iLife. Androany, mijery ny fanavaozana iWork: Pejy, Isa ary Keynote isika.
Fahombiazana ho an'ny Apple ve ny iPhone 5c? mamakafaka ireo angona ananantsika izahay hatramin'ny nanombohany
Mametraha fitarainana amin'ny fomba ofisialy amin'i Apple amin'ny fametrahana azy ho azy amin'ny iOS 7 amin'ny iPhone
Lehilahy iray any California no nitory an'i Apple noho ny fametrahana azy iOS 7 amin'ny iPhone-ny
Ity no campus Apple vaovao ao an-tanànan'i Cupertino
Ny filankevitry ny tanàna Cupertino dia manome antsipiriany vaovao momba ny campus izay haorin'i Apple ao an-tanàna
Hitanay ny niandohan'ny Touch ID, ny sensor sensor momba ny dian-tànana natsangana tao amin'ny iPhone 5s
Ny sarin'ny keynote an'ny 22 Oktobra izay hanoloran'i Apple ny iPad 5 sy ny iPad Mini 2, mba hahafahanao manaingo ny iPhone, iPod Touch na iPad anao ankehitriny.
Fakafakao ny fanasan'i Apple ho an'ny keynote 22 Oktobra
Indray mandeha indray, ao amin'ny iPad News izahay dia mamakafaka ny fanasana ny keynote nalefan'i Apple tamin'ny haino aman-jery rehetra tamin'ny 22 Oktobra.
Ahoana ny fanamboarana ny olan'ny fampisehoana keyboard amin'ny iOS 7?
Amin'ny fitaovana sasany dia mihantona betsaka ny kitendry iOS 7 noho ny olana anatiny azontsika amboarina amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fikirakiran'ny iOS.
Fampisehoana vaovao an'ny iOS 7 ahafahantsika manokatra rakitra voahidy ao amin'ny .zip
Iza i Siri?
Susan Bennett dia nanambara tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny CNN fa izy no feo am-boalohany an'ny mpanampy ny feo manokana ampiasain'i Apple antsoina hoe Siri.
Mahazo mailaka mahaliana avy amin'i Tim Cook ireo mpiasan'ny Apple
Tim Cook, tale jeneralin'ny Apple, dia nandefa mailaka tamin'ny mpiasa Apple rehetra. Nomeny anao herinandro fialan-tsasatra Thanksgiving.
Ny antontan-taratasy vaovao tafaporitsaka tamin'ny Internet dia mampiseho amintsika ny heverina ho refin'ny iPad 5 izay afaka mahita ny jiro miaraka amin'ny iPad Mini 2 mandritra ny volana Oktobra.
Ny Youtube dia hamela ny mpampiasa hijery horonan-tsary tsy misy fifandraisana Internet
Nanamafy tamin'ny fomba ofisialy ny Youtube fa amin'ny volana novambra dia hamoaka endrika vaovao ho an'ny rindranasa finday izy ity: jereo ireo video tsy an-tserasera.
Ity fampisehoana lamaody ity dia noraketina tamin'ny fakantsary iPhone 5s
Burberry dia mampiseho amintsika ny fampisehoana lamaody any Londres, voarakitra tanteraka amin'ny fakantsary iPhone 5s
Microsoft dia tafahoatra amin'ny doka 'anti-Apple' farany
Ny fanambaràna farany nataon'i Microsoft momba an'i Apple dia nahazo fitsikerana an'arivony ary nahemotra
Ataon'i Motorola indray: izao dia ihomehezany ny iPhone 5c
Manafintohina ny iPhone 5c vaovao i Motorola amin'ny fanambarana farany nataony
Ireo no tranga izay tsy hiasan'ny mpamantatra ny dian-tànana amin'ny iPhone 5s
Izahay dia mamaritra ny tranga izay tsy miasa ny mpamantatra ny dian-tànan'ny iPhone 5s
AT&T dia manamafy ny vidiny ho an'ny iPhone 5s, iPhone 5c ary iPhone 4s
Ny orinasan-telefaona amerikana AT&T dia manamafy ny vidin'ny iPhone 5s
New iPhone 5, ilay fitaovana vaovao an'ny sahan'i Apple dia teraka miaraka amina processeur A7 vaovao, fakan-tsary nohavaozina, ary sensor momba ny dian-tànana vaovao.
IOS 7 Golden Master dia misy izao
IOS 7 Golden Master dia misy ao amin'ny vondrom-piarahamonim-pampandrosoana
Apple dia mamaly ny fiampangana ny fanararaotana asa amin'ny fanamboarana ny iPhone 5C
Ny orinasa Cupertino dia namaly ny fiampangana momba ny fanararaotana olona miasa amin'ny fizotry ny famokarana iPhone 5C.
Mivoaka ny boky torolàlana momba ny iPhone 5C
Misy zavatra vitsivitsy mbola tsy fantatsika momba ilay maodely vaovao izay hasehon'i Apple amin'ity talata ity, na dia eo aza ny fisehoan'ny sary izay manome anay ny antsipiriany rehetra.
iPhone 4, ny toerana tena any Etazonia amin'ireo izay mividy ny finday avo lenta voalohany
Ny iPhone 4 no maodely tiako indrindra any Etazonia amin'ireo izay mividy ny finday avo lenta voalohany
Fandaharana vaovao an'ny Apple: mividy iPhone vaovao amin'ny fihenam-bidy rehefa manome ny maodely taloha ianao
Efa mandeha ny programa vaovao an'i Apple: mividy iPhone vaovao amin'ny fihenam-bidy rehefa manome ny maodelinao taloha ianao
Fandaharana hividianana iPhone vaovao miaraka amin'ny fihenam-bidy amin'ny alàlan'ny fandefasana ilay taloha
Ny programa fanodinana iPhone dia ho hita ao amin'ny Apple Store manomboka ny 30 Aogositra miaraka amin'ny fihenam-bidy rehefa mividy iPhone vaovao ao amin'ny magazay
Ilaina ny fanabeazana saingy lasa mahafinaritra kokoa izany raha mampiasa fitaovana Apple na teknolojia vaovao isika. Apple dia manavao ny faritra web "Fanabeazana".
IOS 7 beta 6 dia azo alaina ao amin'ny Ivotoerana mpamorona
Volana Golden Master an'ny iOS 7 ho an'ny 10 septambra
Ny loharanom-baovao akaiky an'i Apple dia manome toky fa ny kinova Golden Master an'ny iOS 7 dia havoaka amin'ny 10 septambra
Io no niandohan'ny feo 'tritone' malaza an'ny iPhone
Lazainay ny pitsopitsony momba ny niandohan'ny feo 'tritone' malaza an'ny iPhone
Ny fiainan'ny olon-tsy fantatra nangalatra ny iPhone-ko, fahombiazana vaovao tao amin'ny Tumblr
Ankizivavy iray manangona ny famantarana an'izay nangalatra ny iPhone-ny fony izy nanao vakansy tany Espana
Mandà ny lalao iray izay misy ny manipy avo ny iPhone i Apple
Apple dia mandà ny lalao ao amin'ny App Store izay misy ny manipy ny iPhone avo
Ny hakingan'ireo mpisoloky dia tsy misy fetrany ary indraindray, manandrana manome vazivazy ho an'ny ...
Netflix dia orinasa manolotra sarimihetsika mivantana sy andian-tsarimihetsika amin'ny vidiny ambany ho an'ny sehatra samihafa: Wii, Playstation, fahitalavitra ...
Tsy mandefa mpamily tsy miankina aminao fotsiny intsony i Uber, fa koa voninkazo, gilasy ary koa angidimby
Hevitra iWatch misy efijery roa mahaliana
"IOS ho an'ny fiara" dia iray amin'ireo fanambarana lehibe indrindra tamin'ny kaonferansa Apple farany tamin'ny fisokafana ...
Rindrambaiko Tango chat voajirika, angona mailaka sy data nomeraon-telefaona 1.5 terabytes
Ny Syrian Elektronika Syriana dia nijirika ny lozisiteran'ny fampiharana antso sy antso an-tsarimihetsika malaza Tango, nahazoana angon-drakitra 1,5 terabytes an'ny mpampiasa.
Apple manadihady ny antony nahatonga ny zazavavy iray herinaratra teo am-pamakiana ny iPhone-ny
Ankizivavy teratany sinoa iray no herinaratra rehefa nivoaka ny trano fidiovana izy hamaly ny antso an-tariby amin'ny iPhone 5 azy izay mamaly.
Manenjika an'i Apple noho ny fandoavana dolara fanampiny amin'ny kaontiny iTunes Store
Samsung dia mihinana Apple amin'ny doka farany nataony
Apple dia misoratra anarana kisary vaovao amin'ny iOS 7
Indray mandeha, Apple patanty dia miavaka amin'ny alàlan'ny Apple Patently. Amin'ity indray mitoraka ity dia izy ireo no sary masina iOS 7 vaovao misy famaritana manokana.
Apple sy ny paikadim-barotra hampiakarana ny varotra
Apple dia mamakafaka ny paikadiny hampitomboana ny varotra amin'ny magazay ara-batana. Hetsika vaovao ho an'ny fahalavoana sy tafika misy fitaovana ho avy.
Apple dia te handrisika ny fivarotana iPhone amin'ny fampiroboroboana vaovao
Apple dia te hampiakatra ny varotra ny iPhone miaraka amina programa fampiroboroboana sy fanangonana ho an'ny maodely efa niasa mba hampihena ny vidin'ny fividianana vaovao.
Inona no hitranga raha esorintsika ny boky, ny takelaka, ny kitapom-batsy sns. ary soloina iPads ao an-dakilasy? Sekoly iraika ambin'ny folo no manolotra an'ity safidy vaovao ity.
«Fampiharana taksizy» atahorana any Los Angeles
Tandindomin-doza ny «apps taxi» any Los Angeles
Aza mampiasa vokatra Apple "hamokarana fitaovam-piadiana niokleary"
Ilay lehilahy nahita ilay prototype iPhone 4 tao anaty bara iray dia nitantara ny tantarany
"Namboarin'i Apple any California": Fanentanana vaovao an'ny Apple
Ny sary HDR dia tonga amin'ny iPad amin'ny beta faharoa an'ny iOS 7
HDR na sary mavitrika avo lenta dia ireo sary izay mampifangaro karazana 3 amin'izy ireo izay miara-mamorona sary tokana
Ny ao ambadiky ny fivoahan'ny iPhone 5S
Steve Jobs biography dia hanana fanontana 'boky am-paosy'
Ny tantaram-piainan'i Steve Jobs dia hanana fanontana taratasy
iOS 7 dia mamela anao handefa fampandrenesana amin'ireo fitaovana Bluetooth hafa
iOS 7 dia mamela ny fandefasana fampandrenesana momba ny rindranasa avy amin'ny App Store amin'ny alàlan'ny bluetooth amin'ny fitaovana toy ny famantaranandro maranitra (smartwatches).
iOS 7 dia mitondra zava-baovao maro amin'ny famolavolana, fa aiza ireo fitaovana sy fiasa vaovao? Manadihady ireo fitaovana sy fiasa vaovao ...
Mpiasa UPS voasambotra noho ny halatra ny vokatra Apple
Best Buy dia manomboka manome ny iPhone 5 mora indrindra any Etazonia
Kaonty an'arivony no voan'ny lesoka Instagram
Ny Galaxy S4: ny finday avo lenta tsara indrindra eny an-tsena, araka ny Consumer Reports
Mirasol, teknolojia fanaova efijery vaovao novolavolain'i Qualcomm
Qualcomm dia nampiditra ny teknolojia Mirasol mikendry ny hanao fampiratiana miaraka amin'ny piksela avo lenta isaky ny santimetatra ary tena mandaitra.
Bibikely ao amin'ny iTunes Store dia mamela anao misintona mozika maimaim-poana
Hevitra vaovao mahatalanjona momba ny efijery hidin-trano (iOS 7)
Ny efijery hidin-trano no singa lehibe jeren'ny mpamolavola hevitra rehefa mamorona ny azy manokana momba izay mety ho iOS 7.
Mampahafantatra an'i Hangouts ho an'ny iPhone sy iPad i Google
Google dia nanolotra ny Google Hangouts, ny fanolorantenany hampivondrona ireo serivisy fandefasan-kafatra eo noho eo amin'ny fampiharana multiplatform mifanaraka amin'ny iOS.
Serivisy lalao Google Play: Ivotoerana lalao Google izay hifanaraka amin'ny iOS
Google dia nanolotra ny Google Play Games Services vaovao, karazana Game Center mifanaraka amin'ny Android, iOS ary ny Web.
Fanadihadiana notontosain'ny zazavavy kely 14 taona dia miantoka fa ny andriamby ipad dia mety hiteraka tsy fahombiazan'ny defibrillator napetraka, izay lozika.
Ny US Patent and Trademark Office dia mampiseho amintsika patanty Apple vaovao amin'ny mpampitohy Lightning izay ananan'ny iPhone 5 sy iPad 4.
Yoigo no mpandraharaha espaniola voalohany nanolotra 4G amin'ny iPhone 5
Mandra-pahatongan'ny Microsoft ny kinova ofisialin'ny Office azontsika atao amin'ny CloudOn, mpizara lavitra virtoaly. Afaka mamorona antontan-taratasy izahay.
Iron Man 3 ho an'ny iOS izao no hita ao amin'ny App Store
Gameloft dia namoaka ny Iron Man 3 ho an'ny iOS, lalao hetsika 3D izay azonao sintonina maimaimpoana amin'ny iPad sy iPhone.
IPhone Hacker Comex Hiasa Ho an'i Google
Ilay hacker fanta-daza amin'ny sehatry ny jailbreak iOS, Comex, dia nanambara fa nokaramain'ny orinasa Google izy hiara-miasa amina zavatra miaraka amin'izy ireo.
Apple dia mandefa fanamarinana amin'ireo tratry ny olan'ny antena ao amin'ny iPhone 4
Yahoo! Mail ho an'ny iPad izao dia misy
Yahoo dia nanangana ny Yahoo! Mail ho an'ny iPad, ahafahantsika miditra amin'ny kaonty mailaka Yahoo antsika amin'ny takelaka elektronika.
Apple dia nitatitra fa misy Apple TV (taranaka faha-3) manana olana amin'ny fifandraisana Wi-Fi
Mampitandrina ny fivarotana rehetra eran'izao tontolo izao i Apple fa ny andiany fahatelo amin'ny fitaovana Apple TV dia miaina lesoka amin'ny fifandraisana Wi-Fi.
Mba hanatsarana ny fahamendrehan'ny bokotra an-tranontsika amin'ny fitaovana Apple izay manana ny bokotra, dia mila manaraka dingana tsotra vitsivitsy fotsiny isika.
Manampy ny emotikon ny Facebook hanehoana ny fihetseham-pony
Feo amin'ny Facebook
Ny mpamorona ny AppGratis dia miaro ny fampiharana azy amin'ny fihetsik'i Apple
Raha jerena ny hevitr'ireo mpisoloky iPad telo taona taorian'ny nanombohany.
Folio Keyboard: fonosana keyboard vaovao Logitech
Logitech dia manolotra tranga fitendry vaovao ho an'ny iPad sy iPad Mini miaraka amin'ny vidiny 100 euro antsoina hoe: Folio Keyboard.
Pebble mamaha ny tsy fahombiazan'ny famantaranandrony marani-tsaina
Apple dia mahazo loka hafa noho ny fahafaham-po ateraky ny iPhone amin'ireo mpanjifany
Apple dia mahazo loka iray hafa amin'ny fahafaham-pon'ny mpanjifa
"Ny antony itiavan'ny olona ny iPhone": Fanentanana vaovao nataon'i Apple
Tranga voalohany amin'ny iPhone 5 nipoaka?
Ny tranga voalohany an'ny IPhone 5 dia mipoitra izay mipoaka ny bateriny, mahatonga ny terminal tsy misy ilana azy ary miteraka afo kely.
Vonona ho an'ny tontolon'ny asa ve ny iPad?
Vonona ny iPad amin'ny tontolon'ny asa, miaraka amin'ny fahatongavan'i Windows 8 sy ireo fitaovana finday miaraka aminy, dia sarotra kokoa izany.
Nokia sy Apple dia mifanandrina amin'i Samsung
PayPal ho toy ny fomba fandoavam-bola ho an'ny fangatahana antoko fahatelo amin'ny iOS
PayPal dia nanolotra ny SDK vaovao misy API izay hamela ireo mpamorona hampiditra ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny PayPal ao amin'ny rindranasan'izy ireo.
GooPhone i5S, ny clone sinoa an'ny iPhone 5S dia amidy ankehitriny
Ny GooPhone i5S dia kopian'ny sinoa an'ny iPhone 5S miaraka amina processeur 1Ghz dual-core, fakan-tsary 5Mpx ary efijery efatra santimetatra izay $ 149 monja.
Sony koa dia mandefa programa handefasana angona avy amin'ny iPhone mankany amin'ny finday Xperia
Sony dia mandefa rindrambaiko fifindra-monina antsoina hoe Xperia Transfer mba hahafahan'ny mpampiasa iPhone mamindra ny angon-drakitra mankany amin'ny finday iray avy any amin'ny faritra Xperia.
PayPal dia nanambara ny SDK hanambatra ny fandoavam-bola amin'ny rindranasa iOS
PayPal dia manambara ny kitapom-pivoarany manokana fa afaka mampandeha ireo mpandahatra programa fampiharana hanaiky ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny iPhone, iPad, iPod Touch.
Ny endrika Facebook vaovao: entanin'ny fampiharana azy
Fanentanana dokambarotra Samsung sy Apple: iza no mandresy amin'ny ady?
Apple sy ny olan'ny obsolescence efa nomanina
Ny filankevi-pitantanan'i Apple dia mizaha fitaovana hatramin'ny 18 volana alohan'ny hanombohana
Evasi0n 1.4 dia azo alaina ho an'ny iOS 6.1.2 ankehitriny
Sarintany ifandraisana miaraka amin'ireo mpamatsy Apple rehetra
Sarintany miaraka amin'ireo mpamatsy Apple rehetra
Apple dia manaparitaka rafitra iray hanatsarana ny kalitaon'ny sary nalaina
Apple dia mety hanome tariby tselatra tsy nahazoana alalana tsy azo ampiasaina
Apple dia mety manavao ireo faktiora fanamarinana tafiditra ao amin'ny kojakoja plug-in LIghtning mba tsy hampiasaina ny vokatra sinoa.
Apple dia manaparitaka fampiharana iray hampindrana vola amin'ny olon-kafa
Tsy fanarahan-dalàna izao ny famohana ny iPhone any Etazonia
Tsaho momba ny fananganana ny iPhone 'Math' miaraka amin'ny efijery 4.8-inch
Araka ny tsiliantsofina re, Apple dia mety nanomana modely iPhone vaovao antsoina hoe iPhone 'Math' izay mety hahitana efijery 4.8-inch ho zava-baovao.
'Find my iPhone' dia mitarika an'izay diso lalana iPhone ho any an-tranon'ity lehilahy ity
'Tadiavo ny iPhone-ko' dia mitarika an'izay olona very iPhone any an-tranon'ity lehilahy ity
SquareTrade dia nanambara ireo faritra dimy mampidi-doza indrindra ho an'ny iPhone ao an-trano dia ny lakozia, efitrano fandraisam-bahiny, fandroana, lalantsara ary efitrano fandriana ary koa lena.
Androany i Steve Jobs no nanolotra ny iPhone enin-taona lasa izay
Ny 10 Janoary 2013 dia enim-bolana taorian'ny nanoloran'i Steve Jobs ny maodely iPhone voalohany izay nanova ny tontolon'ny telefaona finday.
Tsy afaka manova ny sarin'ireo fampiharana ao amin'ny iTunes Connect ireo mpamorona
Ireo mpamorona manana rindranasa ao amin'ny App Store dia tsy afaka manova sary ao amin'ny iTunes Connect raha tsy mandefa fanavaozana izy ireo.
Liquidmetal dia mamela ny telegrama an-tariby hivelatra hatramin'ny 8x ny halavany tany am-boalohany
Izy ireo dia manao ampahany amin'ny tariby headphone avy amin'ny liquidmetal sy polymer elastika izay afaka mamelatra hatramin'ny valo heny amin'ny halavany.
Google dia hanaisotra ny fanohanana ny Exchange ao amin'ny kaonty Gmail-ny (fampandrenesana famporisihana veloma amin'ny iOS)
Google dia nanambara fa afaka andro vitsivitsy dia hanafoana ny fanohanan'ny Exchange ao amin'ny kaontiny Gmail izy, ary hanao veloma ny handefasana fampandrenesana amin'ny iOS izahay.
Tranga iray azo hanina ho an'ny iPhone 5 no amidy any Japon
Blue Sky: tetikasa iray hanomezana fahafaham-po ny mpiasan'ny Apple
AT&T dia mandefa ny Cloud azy manokana miaraka amin'ny tahiry 5 GB maimaimpoana
AT&T dia mandefa ny Cloud-ny azy miaraka amin'ny tahiry maimaimpoana 5GB
Ny fonosana fonosana vaovao an'ny headphones Apple
Taolana IPhone 5 Jiro voajirika
Ny sarintanin'i Apple dia kely kokoa noho ny sarintany Google no mihinana data
Apple Maps dia kely kokoa noho ny Google Maps no mandany angona
IPhone volamena 5
Vidiny, loko ary fahaiza-manao azo ampiasaina amin'ny iPhone 5
Ny vidin'ny iPhone 5 ary koa ny fahaizany sy ny loko misy azy dia hitovy amin'ny an'ny iPhone 4S amin'ny fanombohany.
Lahatsary misy iPhone 5 mihodina voalohany
Navoaka ny horonan-tsary voalohany an'ny iPhone 5 vaovao, ary sambany vao mandeha eo akaikin'ny iPhone 4S ilay izy. Ny terminal dia nesorina tao Foxconn.
Sary voalohany amin'ny tariby famandrihana iPhone 5 miaraka amin'ny fifandraisana miniDock
Sary izay mampiseho ny fisehon'ny tariby mametra izay hananan'ny iPhone 5 izay ahitàna ny fifandraisana dock mini.
IPhone voalohany amin'ny eBay amin'ny vidiny 'maotina' $ 10.000
IPhone voalohany amin'ny eBay amin'ny vidiny ambany $ 10.000
"Ny tanjon'i Apple dia tsy ny hitady vola, fa ny hanolotra vokatra tsara"
Maninona i Steve Jobs no tsy te hanana ny fahazoana an'i Yelp an'i Google
Yelp dia serivisy ahafahantsika manombatombana orinasa sy trano fisakafoanana amin'ny firenena samihafa ary mianatra, avy amin'ny iPhones, bebe kokoa ...
Hevitra IWatch, fiambenana Apple
Ity foto-kevitry ny Apple watch ity, iWatch, dia mitondra fitaovana iray misy fitaovana tsara indrindra eny an-tsena amin'ny toerana kely dia kely.
WhatsApp dia manadio ny fisalasalana momba ny tena dikan'ilay 'fisavana indroa'
WhatsApp dia manambara ny tena dikan'ilay 'fisavana indroa'
Nanaja an'i Steve Jobs i DJ Steve Aoki tamin'ny hira iray nomena ny anarany
Meta Watch, ny famantaranandro izay mandray fampandrenesana avy amin'ny iPhone
Ny Audi e-bike dia mampiasa ny iPhone ho console data ihany koa
Audi dia nanolotra ny e-Bike, bisikileta misy haitao avo indrindra ary azo atao ny mampiasa ny iPhone ho solosaina an-tsambo.
Fampitahana: Siri vs Samsung S Voice vs Speaktoit Assistant
Fampitahana ireo mpanampy ny feo lehibe ankehitriny: Siri vs Samsung S Voice vs Speaktoit Assistant. Inona no ho tsara indrindra amin'ny rehetra?
Facebook dia manambara fanavaozana ny kinova findainy
AT&T: reharehan'ny iPhone, azafady noho ny drafitra tsy voafetra
AT&T, reharehan'ny iPhone, azafady noho ny drafitra tsy voafetra
Inona no fotoana mety indrindra hividianana iPhone, iPad na iPod Touch?
Infographic izay mampiseho amintsika ny fotoana mety indrindra hividianana iPhone, iPad na iPod Touch mba hitehirizana ny vola betsaka indrindra.
Twitter ho an'ny iPhone dia mahatratra ny andiany 4.2 miaraka amina endrika vaovao maromaro
Tonga amin'ny kinova 4.2 ny Twitter ho an'ny iPhone miaraka amin'ny vaovao isan-karazany izay notakin'ireo mpampiasa nandritra ny fotoana ela.
Marvel vs. Capcom 2 dia havoaka amin'ity herinandro ity amin'ny iOS
Ny sarimihetsika Steve Jobs dia nanamafy tamin'i Ashton Kutcher ho mpilalao sarimihetsika
Tamin'ny 1 aprily (andro "Holy Innocents" any Etazonia) dia gaga izahay tamin'ny vaovao fa ny ...
Rano mitete iray no manova ny iPhone ho lasa mikraoskaopy
Fanandramana iray no mamadika ny iPhone ho mikraoskaopy aorian'ny fametrahana rano kely amin'ny fakan-tsarin'ny telefaona Apple.
Ny iPad vaovao: olana amin'ny elanelan'ny Wifi fa misy vahaolana haingana
Manampy olana vaovao amin'ny iPad vaovao izahay: ny fifandraisana Wi-Fi dia toa tsy misy fandraisana toa ny modely ...